URUR KU EEDEYEY ITOOBIYA INAY KA SHAQAYNAYSO COLAAD DHAXMARTA SOOMAALIDA IYO OROMADA – Xeernews24
URUR KU EEDEYEY ITOOBIYA INAY KA SHAQAYNAYSO COLAAD DHAXMARTA SOOMAALIDA IYO OROMADA
STOCKHOLM – Ururka cadaalada iyo dimuqraadayada gobolka Soomaalida ayaa EPRDF, gaar ahaan jabahada TPLF si xoog leh ugu eedeye inay ka shaqaynayso sidii la isaga horkeeni lahaa dadweynaha walaalaha ah ee Soomaalida iyo Oromada. Dhaqdhaqaaqa SRJDM ayaa si kulul u camaabareyey ficilada TPLF ka wado dhulka xadka ah ee kala qaybiya Oromada iyo Soomaalida oo lagu sheegay kuwo hurinya colaad sokeeye.
Eedeyta ururka ayaa salka ku haysa warar isasoo taraya oo tilmaamaya in ciidanka gaarka ah ee DDSI, Liyu boolis, ay weeraran dhawr degmo oo ku yaal xadka labada gobol halkaas oo khasaare ka dhasahay.
Warkan oo lagu baahiyey afafka Oramada iyo Xabashiga ayaa lagu sheegay in xukuumada Itoobiya adeegsanayso dawlada maqaar-saarka ah ee Jigjiga si ay u fuliso falkeeda waxashnimo ee lagu daadinayo dhiiga dadka walaalaha ah.
Warbixinta oo lagu faafiyey baraha bulshada ee dhaqdhaqaaqu ku leeyahay internet-ka ayaa lagu qeexay in labada shacab wadagaan dhaqan, diin iyo dhalasho aan si dhibyar lagu kala goyn karin islamarkaana uuna jirin wax khilaaf ah oo ka dhaxeeya. Waxaa ay warbixintu intaa ku dartay, in hadiiba ay jiraan wax xurgufo ahi si ehelnimo ah labada dhan u dhamaysan karaan.
Ururka oo bilo ka hor lagaga dhawaaqay dalka Sweden ayaan aad loo aqoon dadka xubnaha ka ah marka laga reebo dhawr qof oo horey xilal uga soo qabtay dawlada federaalka iyo DDSI. Fariinta ururka ayaa u muuqata mid ku wajahan qoomiyadaha kale ee Itoobiya iyo xukuumada federaalka ah si loogu muujiyo in uu jiro dareen kale oo ka duwan ka ay soo bandhigto dawlada kililku.
Dhaqdhaqaaqa SRJDM ayaa sheegay in ololaha TPLF qayb ka yahay siyaasadii ‘qaybi oo xukun’ ee 25-kii sano ee la soo dhaafay dalka lagu maamuliyey.
Ururka ayaa ugu baaqay bulshada Oromada iyo Soomaalida inay gacamaha isqabasadaan si ay u fashiliyaan shirqoolada xukuumada Itoobiya.
Dawlada Itoobiya iyo xukuumada Kililka ayaan inta badan ka jawaabin eedeymaha loo soo jeediyo ismaamulka Soomaalida
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png 0 0 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-01-25 17:12:342017-01-25 17:12:34URUR KU EEDEYEY ITOOBIYA INAY KA SHAQAYNAYSO COLAAD DHAXMARTA SOOMAALIDA IYO OROMADA
Deg Deg Dhalinyarada Mareykanka laga soo tarxiilay oo Muqdisho laga soo dajiyay... Donald Trump oo sheegay in uu Joojinayo Kulanka Mexico Hadii ay diidaan Lacagta...